Xperia V LT-25 9.2.A.1.210 Nodric ( 4.3 ) Firmware !
အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Xperia V ” LT-25 ” မော်ဒယ်ရဲ့4.3 Firmware လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ…. အသေးစိတ်ကိုတော့ ပြောစရာတောင်လိုမယ်မထင်ဘူးနော်… Download ( Xperia V Firmware ) Mega Link Download ( Xperia V Firmware ) Pcloud Link အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း……[email protected]
G730-U00 & G730-C00 Latest Firmware !
နောက်ဆုံးထွက်ရှိလာတဲ့ ” Huwei G730-U00 & G730-C00 ” တို့ ရဲ့Firmware Build Number Update Firmware လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ.. လိုအပ်သူများ ယူသွားပါဗျာ…. Download ( G730-C00 Build Number 157 ) Official China Link Download ( G730-U00 Build Number 138 ) Official China Link အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ….[email protected] Share
Huwei Honor 3C – 2G H30-T10 Firmware !
ထွက်လည်း ထွက်နိုင်တဲ့ Huawei တွေရယ်လို့ အများကသိထားတဲ့ Huwei Honor 3C Firmware Update လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ…. ဒေါင်းလိုက်ပါအုန်းဗျာ…… Download ( H30-T10 Build Number 123 ) Official Huawei Site Link အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ…[email protected]
Xperia V ( LT-25 ) 9.2.A.1.210 Version 4.3 Firmware !
April လထဲမှာပဲ အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ ” Xperia V ” 4.3 Firmware လေး ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ…. လိုအပ်သူများဒေါင်းလိုက်ပါအုန်းဗျာ….. အားလုံးပဲပျော်ရွှင်ဖွယ်နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေဗျာ…… Download ( Xperia V Firmware ) Mega Link Download ( Xperia V Firmware ) Pcloud Link အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း…………[email protected] Share
Xperia E1 Dual ( D2105 ) 20.0.B.0.68 Version 4.3 Firmware !
ကဲ…Sony ကနေ အသစ်ထပ်ထုတ်လိုက်တဲ့ ” Xperia E1 Dual ” ဆိုတဲ့ကောင်လေး အတွက် Firmware တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီကောင်လေးကတော့ ကိုင်ဆောင်ရတာလည်းပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ဈေးနူန်းကော Version ကလည်း အမြင့်ဆိုတော့ သုံးစွဲသူများမယ်လို့ ထင်တယ်ဗျ….ဒါကြောင့်လည်း ဒီကောင့် Firmware လေးကို ဒေါင်းရတာ အခက်အခဲရှိမယ်ထင်တဲ့ ညီအစ်ကိုများအတွက်ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် ဒေါင်းလိုက်ပါအုန်းဗျာ………. Download ( Xperia E1 Dual Firmware ) Mega Link Download ( Xperia E1 Dual Firmware ) Pcloud Link Specification အပြည့်အစုံကိုသိချင်ရင် ဒီကိုနှိပ်ပြီးဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့ နိုင်ပါတယ်ဗျာ…. အားလုံးအဆင်ပြေပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း…………[email protected]
Xperia Sp ( C5303 ) 12.1.A.1.201 4.3 Firmware !
အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ ” Xperia SP ” ရဲ့4.3 Firmware လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် လိုင်းကောင်းသူများကတော့ Mega Link ကဒေါင်းပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်ဗျာ…. ဒေါင်းလိုက်ပါအုန်းဗျာ…. Download ( Xperia Sp 4.3 Firmware ) Mega Link Download ( Xperia SP 4.3 Firmware ) Pcloud Link အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ…….[email protected] Share
Root Xperia Z1 on Android 4.4.2 (14.3.A.0.681) KitKat with Locked/Unlocked Bootloaders !
မေးနေတဲ့အစ်ကိုတွေအတွက် ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ…. ကျွန်တော်ကတော့ မစမ်းသပ်ရသေးတဲ့အတွက် ရနိုင်မရနိုင်ဆိုတာတော့ အာမတော့ မခံပါဘူးဗျာ….ကိုယ်ထိုက်နဲ့ ကိုယ့်ကံပေါ့ဗျာ…. တခြားနည်းလမ်းလည်းမရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ စမ်းချင်ရင် အကုန်လုံးလုံး Backup ယူပြီးမှလုပ်စေချင်ပါတယ်ဗျာ….. အရင်ဆုံးလိုအပ်တာလေးတွေဒေါင်းလိုက်ရအောင်ဗျာ….. Download ( Z1-lockeddualrecovery2.7.117-BETA.installer.zip ) Download ( C6902_14.3.A.0.681_Stripped.zip ) Download ( C6903_14.3.A.0.681_Stripped.zip ) Download ( C6902_14.3.A.0.681.flashable.zip ) Torrent File You Will Need Bittorrent Download ( C6903_14.3.A.0.681.flashable.zip ) Torrent File You Will Need Bittorrent Download ( Bittorrent installer.exe ) အရင်ဆုံးလိုအပ်ချက်ကတော့မိမိတို့ ဖုန်းဟာ…Version […]
Xperia Z1 Compact D5503 14.3.A.0.681 (4.4.2 ) Firmware !
ကဲ……အမြစ်တူးတာတင်ပြီးတော့ တချို့ တွေက Firmware လေးလည်းတင်ချင်မှာပေါ့နော် ဒါကြောင့် Z1 Compact 4.4.2 Firmware လေးပါတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ…. ဒေါင်းလိုက်ပါအုန်းလို့Download ( Z1 Compact 4.4.2 Firmware ) Mega Link Download ( Z1 Compact 4.4.2 Firmware ) Google Drive Link Download ( Z1 Compact 4.4.2 Firmware ) Uloz Link Credit To : XDA Developer.. အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း…………..[email protected]
Galaxy Tab3 3G Lite 7.0 ( SM-T111 ) Firmware !
အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ ” Galaxy Tab33G Lite ” Firmware လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ.. ဒီကောင်လေးဟာဆိုရင် Version 4.2.2 နဲ့ လာပါတယ် ကျွန်တော်တင်ပေးမယ့်ဟာက အမြစ်တောင်တူးစရာမလိုတော့ဘူးဗျာ…. မြန်မာစာပါပြီးသား Firmware ဖြစ်တဲ့ THL Firmware လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ… လိုင်းကောင်းတဲ့သူများကတော့ Original Link ကနေဒေါင်းပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာ…… Download ( SM-T111 THL Firmware ) Pcloud Link Download ( SM-T111 THL Firmware ) Rapidgator Link အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း…………..[email protected]